[Hevitra maneso] GNU Social: Ahoana no nahatonga ny mpivaro-tena nijery ny tambajotra sosialy hippie ho tambajotra sosialy tsotra. | Avy amin'ny Linux
diazepan | | About us, Tambajotra / seriver
Ny lahatsoratra manaraka dia tsy matotra.
Tao amin'ny toerana iray tao amin'ny tranonkala, izay tsy tiako tadidiko ny anarany, dia nipoitra tsy ela akory izay ny sehatra iray malalaka sy tsy masiaka nantsoina hoe StatusNet, izay node identi.ca no tena nitazona hipopotama maro izay maniry twitter maimaimpoana.
Tamin'ny taona 2013, miainga ho an'ny pump.io sy StatusNet vao lasa GNU Social ny identi.ca. Tamin'io taona io ihany, dia nisy hippies marobe nanangana tambajotra toy izany (miaraka am-pielezana sy ny hafa) noho ny fanambaran'i Snowden.
Nefa toa ny hipopotama ihany no te hiditra, satria izy ireo ihany no miahiahy momba ny fahalalahana sy ny fiainana manokana. Ny hafa dia nahazo aina kokoa tamin'ny tambajotran'izy ireo afovoany niaraka tamin'ireo mpanaraka an'arivony, ny fianakaviany sy ny namany akaiky, ny lalao, ny volabem-bahoaka, ny sarin'ny faritra misy ny vatany, sns.
Mandra-pahatongan'ny andron'ny GNU / Mufa dia tonga ihany tamin'ny farany. Talata 13 Janoary 2015.
Tamin'io andro io, poeta vavy iray penina sy napkin ary hevitra iray avy amin'ny fisotroan-dronono tao amin'ny twitter izay niantso ny tenany hoe @barbijaputa, no nahita bitsika somary nanafintohina an'i @isaacj momba ny fitazomana ireo mararin'ny hépatite c. @barbijaputa nizara ny fisamborana an'io bitsika io ary "namerina ny ompa" ary rehefa afaka kelikely dia nahazo mailaka avy amin'ny twitter izy nilaza fa naato ny kaontiny ... ... noho ny fizarana bitsika manafintohina izay tsy azy akory (sy ny fikasana hamaly ny fitarainana). Avy eo, samy ao amin'ny bilaoginy (tsy maintsy manindry ny bokotra fijanonana izy ireo mba hamakiana azy, manana plugin iray izay mihodina ao anaty loop) sy ao amin'ny faritra mitsikera ny antia.es (izay niarahany niasa ihany koa) dia nanomboka nitaraina toy ny hoe zanakavavin'i Violencia Rivas sy ilay Tano Pasman nananan'izy ireo tamin'ny alin'ny firehetana mafy izy. Ny politikan'ny sivana dia tsy fitovian-kevitra, ny fivarotana data tsy miankina amin'ny hafa dia fanararaotana hafa, fa i @isaacj dia fanararaotana noho izy mpanaraka mahatoky an'i Intereconomía, sns
Anisan'ireo mpaneho hevitra izay nanohana azy, farafaharatsiny nisy hippies iray na roa nilaza fa manandrana tambajotra maimaimpoana izy (sahala amin'ny nanandraman'ny Fanjakana Islamika ny diaspora). Ary tiany ilay hevitra. Notondroin'izy ireo mihitsy aza ny teboka GNU Social antsoina hoe quitter.
Taorian'ny nidirany tao amin'ilay tamba-jotra dia nanomboka nahazo avalanche mpanaraka nanatevin-daharana ilay teboka io quitter.se. Nisy haino aman-jery maro be nilaza lohateny hoe "Quitter, ity no Twitter tsy voasivana sy manohitra ny kapitalista" (seee, anarcobolches ihany, izany rehetra izany dia noho ny faneva ratsy nolazain'izy ireo fa te handao ny serivisy foibe kapitalista). Avy any Europapress ka hatrany Russia anio, manomboka amin'ny El País ka hatramin'ny Intereconomie. Alberto Moshpirit, Adrian Perales, Victorhck ary ireo mpiasa rehetra ao amin'ny El Binario dia nisintona ny volon'izy ireo tamin'ny fampahalalana diso be loatra, nefa niaraka tamin'izay dia nandihy tamin'ny tongotra iray izy ireo nanakoako ny feon'ny Hongariana Dances of Brahms. Ny twitterstar misafoaka dia mahatratra ao anatin'ny roa andro mahatsikaiky izay irin'izy ireo ho tratra taorian'ny volana sy volana naharetana sy nilalao.
Androany, efa misy mpizara español, ankoatra izany maromaro efa misy (ity lisitra hafa dia feno kokoa). Alberto koa dia nanoratra rohy mahasoa maromaro Ho an'ny ao anatiny, raha toa ka mikononkonona ny drafitra hanelingelenana ilay zazavavy facebook hifindra any am-pielezana. @barbijaputa Niverina ny kaonty twitter azy ary mampiasa ny kaontiny roa izao.
E @isaacj? Misaotra azy ireo farafaharatsiny fisaorana.
Araka ny filazan'i El País, mila misaotra ahy ianao fa nahazo ny perroflautas rehetra nankany Quitter: http://t.co/qDp4d6XqnN #tsisy fisaorana
- Isaacj (@isaacj) Janoary 17, 2015
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » [Hevitra maneso] GNU Social: Ahoana no nahatonga ny mpivaro-tena nijery ny tambajotra sosialy hippie ho tambajotra sosialy tsotra.
McX dia hoy izy:
Nanaraka an'ity bilaogy ity aho satria noheveriko fa momba ny "Linux ho an'ny zaza vao teraka."
Saingy toa resaka "fifosana amin'ny Internet sy ny poizina ho an'ny zaza vao teraka" io ary koa politika.
Mavesatra izany. Veloma.
Mamaly an'i McX
mbola tsy nijery ireo lahatsoratra hafa momba ny fonony 9 ve ianao?
Fanehoan-kevitra mampalahelo. Mieritreritra aho fa miankina aminy ny hevitro saingy tsy maintsy nolazaiko izany: Mandraka androany, tsy mbola hitako fa tamin'ny anaran'ny solon'anarany na ny mailaka nomeny, dia nisy denaria iray tonga tany amin'ny kaontinay PayPal hanomezana zavatra ara-bola miresaka amin'ity bilaogy ity, ary angamba miaraka amin'izany, azonao atao ny mitaky ny hanoratanay lahatsoratra izay tianao hovakiana.
Na izany aza, ny heviny voalohany dia ny milaza fa hiala izy ary indray mandeha, tsy manampy na inona na inona mihitsy izy. Okay McXMahamenatra, tsy nisy nanery anao ho tonga ary tsy hisy hanery anao hijanona, bilaogin'ny Community ity izay anoratan'ny olona maro, ary raha tsy tianao ny mpanoratra dia manana vitsivitsy hafa ianao, fa raha nanapa-kevitra ny hiala ianao dia mirary soa! Ary manomboka izao dia lazaiko aminao, handray tsara anao foana ianao.
GNU Social, StatusNet ary / na Diaspora * dia rindrambaiko maimaimpoana, izay miasa fahagagana amin'ny GNU / Linux. Ny ifandraisan'ny lahatsoratra dia - miresaka momba ny vazivazy nataon'i John Oliver tamin'ny fomba Uruguay- dia ny fomba isehoan'ny a @ figuretti anaty tambajotra sosialy itsinjaram-pahefana kokoa noho ny mpino tambajotra sosialy malalaka.
Raha mankany amin'ireo isika, dia azo antoka fa tsy ho ela dia hanana YouTube malalaka kokoa izay tiako eritreretina koa.
misy zavatra manakaiky. mediagoblin no iantsoana azy.
Heveriko fa tsikelikely i Peertube dia manamboatra nify ho toy ny safidy tsy voafindra amin'ny YouTube.
Tiako ny lahatsoratr'ity lehilahy ity. Tena am-boalohany izy ireo. XD
mariqueerta dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara. Satria hitako fa faly be daholo ianareo, maninona no tsy apetrakao amin'ny bokotra maimaimpoana ny bokotra? Miteny aho.
Mamaly an'i mariqueerta
Manaiky tanteraka aho, raha ny marina dia saika nilaza zavatra mitovy ihany aho!
Misoratra anarana aho. Ny mizara gnusocial dia ity
ary ho an'ny diaspora ity
ary ity dia handefa azy ho azy any am-pielezana
Mangina izy ireo handeha eny ...
2000px malalaka ho an'ny bokotra maro be
Inona no tadiavin'ny vahoaka ... cirque !!!
tsy misy raharaham-barotra, tsy mandeha ny zava-drehetra, hitanao i Justin Beiver, ankehitriny ny mpankafy azy dia mpampiasa Photoshop daholo hanitatra ny fonosana ary hanome azy ireo abs sexier: fihomehezana
ny marina, mampalahelo ity lahatsoratra ity. »Tambajotra ho an'ny hipopotama»? Azafady azafady azafady ny maha-zava-dehibe ny media sosialy malalaka sy itsinjaram-pahefana alohan'ny hitondrana azy toy izany. Ka iza amintsika izay miahy ny fahalalahana sy ny fiainana manokana no hippies?
Fa mazava ho azy, inona koa no antenaina avy amin'ny bilaogy iray izay "heverina" fa hanohana rindrambaiko maimaimpoana, nefa tsy afaka mamorona kaonty akory izy ireo amin'ny Diaspora *, Pump.io na GNU Social, aleon'izy ireo manohy Faceshit.
ho any amin'ny helo. manomboka androany dia mitsahatra tsy manaraka an'ity bilaogy ity aho. very mpamaky iray avy amin'ny linux fotsiny izy ireo.
1) Tsy takatry ny olon-tsotra ireo zavatra ireo. Araka ny nolazaiko, mahazo aina amin'ny tambajotram-pifandraisana miaraka amin'ireo olona fantany izy ireo, tsy miraharaha firy ny zavatra toy ny fiainana manokana sy fahalalahana.
2) Tsy ahy ity bilaogy ity fa maro no manoratra eto, samy manana ny fomba fijeriny avy.
3) Mirary soa.
Heveriko fa ny hevitro etsy ambony dia mazava tsara ny resaka. Aza manahy intsony momba ireo karazana fanehoan-kevitra diazepan ireo.
Mandrosoa ... na dia voamarika ho "hevitra maneso aza" ilay lahatsoratra ary mampiseho ny fampitandremana hatrany am-piandohana fa "Tsy dia matotra ny lahatsoratra manaraka" dia tsy ampy ity lehilahy ity; Tsy misy, izay na tsy mahay mamaky antonony tsara, tsy mahay mahatakatra ny fihomehezana na izy roa. Mampalahelo ireo fahasembanana ireo fa mbola tsy namorona fanafody izy ireo, ka tsara kokoa ny tsy miraharaha azy ireo ary miroso ...
Noho ny tsy fahampian'ny fahazoana mamaky teny dia nivoaka tsy an-kijanona ny fanehoan-kevitra.
Te-hilamina izy ireo, na dia heveriko aza fa tsy marina ilay adjectif "hippie" dia tsy heveriko ho fanipazana ankolaka (ary misy mivantana ihany koa) noho ny zavatra nolazainy fa "ity lahatsoratra manaraka ity dia tsy zavatra matotra "Ka tsy mety ny manohy an'ity raha tsy izany dia ho lany mpamaky izahay tsy ho ela
Countryman ... tokony hodinihintsika ny "style" amin'ilay lahatsoratra ...
Fomba ahoana? Hatsikana ity.
Dalton dia hoy izy:
Tiako izany ... Inona no mitranga, inona no tokony holanianao tontolo andro hiresahana ny momba ny baiko?
Ny sasany toa mbola tsy nahita hoe inona ny tontolon'ny rindrambaiko maimaimpoana sy ny Linux misolo tena ...
Heveriko fa momba ny fahalalahana sy ny fandaminana tena, fikomiana ary ady amin'ny fanoherana fahefana ... tsy fantatro, toa mahazatra ...
Valiny tamin'i Dalton
Mangidy be hitako maneho hevitra eto, mangidy fa tsy azon'izy ireo ny mampihomehy sy maneso ny lahatsoratra
Mandrosoa, alao ny sôkôlanao mafana izay mangatsiaka ary tezitra i Neny.
Amin'izany rehetra izany, lahatsoratra tena tsara, ...
Mahafinaritra @diazepan, tsara ity lahatsoratra ity 😀
PS: @elav antsipirihany miaraka amin'ny horonantsary YouTube izay mipoitra eo ankavanana eo amin'ny 50 px rehefa mandeha amin'ny vahaolana 1152 × 864 ianao
Efa nandray an-tsoratra aho .. Misaotra
Miantso ny olona mitady hippies fahalalahana ve izy ireo?
Inona no manesoeso !! Sangisangy inona !! Inona no lazain'ny fiandohan'ny lahatsoratra ... novakianao ve izany?
Damn, heveriko fa izany no fiheverany marina momba ny tambajotra sosialy maimaimpoana, ny fanalàn'izy ireo azy ho "satire" fotsiny, mila jerena fotsiny fa tsy manana kaonty amin'ny tambajotra sosialy malalaka i DesdeLinux.
Eny izany (ao Diaspora *), tsy misy admin izay mitantana azy 24 ora isan'andro. Ary mbola ratsy kokoa aza, ny ankamaroan'ny mpijery dia mandeha amin'ny fanoratana ny URL amin'ny tanana na amin'ny alàlan'ny FB, Twitter ary tambajotra sosialy afovoany.
Hatsikana kely azafady. Mitady vazivazy i Satire amin'ny alàlan'ny fanitarana sy fanodikodinana ny tena zava-misy. Ny tambajotra sosialy maimaim-poana dia tsy tambajotra hippie, saingy tsy azo lavina fa hatramin'ny zoma dia misy olona mifandray amin'ny GNU / Linux (geeks) ary koa ny kominista / anarchista (izay azo ampidirina, indrindra ny vondrona faharoa)., Toa ny hippies, any Espana perroflautas).
Mampalahelo fa ity dia tweetstar izay mamindra amin'ny GNUSocial, na izany aza mieritreritra aho fa tsy maintsy jerenao amin'ny maso tsara. Raha hita fa mahomby ary milamina ihany amin'ny farany, dia ho tratra izay notadiavina, dia ny fampiasana tambajotra sosialy malalaka.
Nampiasain'izy ireo hilazana ny zavatra ataony hatramin'ny fotoana ifohazany ka hatory?
Ny olan'izy ireo, saingy ampiasainy. Tsara kokoa noho ny tambajotra afovoany. Manampy an'i TOX na Jabber isika amin'izany ary io ihany. Diazepan tsara fidirana 😉
Tsaroako fotsiny fa tamin'io andro io aho dia nifoha ary rehefa nanamarina ny mailaka aho dia namaky momba ny quitter jaringan anti-kapitalista ary nieritreritra aho fa tsy niraharaha ilay zavatra manohitra ny kapitalista…. miresaka momba ny quitter…. wooow…. Rehefa nanomboka namaky aho dia tsaroako ary nahatsapa korontana toy izany koa, rehefa nanidy megaupload izy ireo… Noheveriko… natory 5 ora aho, nandao irery ny Internet aho ary nifoha tamin'ity…. korontana ...
Noho ny fanidiana ny Megaupload dia nanomboka nino ny ony aho.
Fantatro izao ny fomba handresena lahatra ny olom-pantatro amin'ny fomba fanomezana Facebook sy fifindra-monina any Diaspora *: lasa a figuretti Internet (ary tsy nahomby ireo andrana nataoko teo aloha).
Figuretti ilay avy any Magaly, na i Figuretti ilay toetran'i Videomatch? Satria ny faharoa dia olona mitsofoka amin'ny malaza.
Figuretti no tiako horesahina hoy i Magaly Medina (ilay faharoa dia efa nameno ny fahitalavitra misokatra rehetra, na dia efa nandresy ny fahitalavitra Peroviana aza i Espana tao amin'ny Attention Whores).
Satria hanana fahasahiranana kely ianao. Mba hahatratrarana izany dia tsy maintsy omenao ho an'ny siansa aloha ny ati-doha ary hijanona ho neonona 2 fotsiny (raha azo atao, samy kilemaina), ny iray natokana ho amin'ny fifosana ary ny iray hafa natokana ho an'ny lamaody, ny fitsaboana amin'ny laoniny ary ny sakafo. Raha tsy mahafeno ireo fepetra takiana ireo ianao dia mieritreritra aho fa tsy ho malaza amin'ny maha-figuretti anao 😉
Mampalahelo, satria rehefa te-ho figuretti aho dia troll, raha miresaka momba ny fampisehoana orinasa aho dia mahita ahy ho toy ny Attention Whore hafa ihany.
Haha, atricle tena tsara
Manana kaonty Diaspora sy Shitbook aho: Faly aho fa (tapany) hippie: v!
Lahatsoratra mahafinaritra. Fantatro ny momba ny resadresa-poana izay mitranga rehefa mamaky lahatsoratra Linux eto sy amin'ny pejin-tsakaiza hafa aho ary tsy nahafantatra xD akory. Manantena aho fa hahita bebe kokoa amin'ity tonika ity, noho izany dia manana fotoana fialantsasatra kely eo anelanelan'ny consoles sy distro vaovao miseho 🙂
Tsy tokony hatao ambanin-javatra mihitsy ny fanehoan-kevitr'ireo malala-tsaina sy voarindra amin'ireo fikambanana misaina malalaka ary tsy misy zanakavavin'ny White House sy ny Pentagon izay kapitalista kapitalista izay hany tadiavin'izy ireo dia ny fampandrenesana sy fampandrenesana antsika amin'ny fahavalo nomerika izay Saint Edward Snowden (izay any Russia) dia nanambara teo imason'ny masontsika tsy mahita sy tsy mahita fa jamban'ny Feisbuc sy Tuiter izay mametra ny fahalalahana nomerika sy mimari-droa (iray aotra, ataoko-tsy miteny aho, miteny aho-tsy miteny, manonofy- nofy ratsy) mpiserasera mpisolo toerana tafaray, tsy ho resy mihitsy izy ireo! Tambajotra sosialy maimaimpoana ho an'ny rehetra! Rariny ho an'ny windowslerdos! Fahafahana ho an'ireo android tsy maimaim-poana! Ry rahalahy, vita ny fivoriana, mandehana soa aman-tsara.
Amin'ny tononkira maneso sy mahatsikaiky, heveriko fa tena tsara ny fidirana.
Mazava ho azy, tsy ekeko ny zavatra "banner damn" momba ny fanazavana ao amin'ny Quitter.se izay manondro ny fijoroany sy ny fikasany. Heveriko fa tsy misy "bontolo" amin'izany, na eo aza ny zava-misy fa misy olona resahina (noho ny tsy fahalalana na inona na inona) tsy manaiky.
Quitter.se dia miasa tsara, ary miombon-kevitra amin'ny tsipika mampihetsi-po aho. Manantena aho fa hihamaro hatrany ireo tranokala sy serivisy amin'ireo toetra ireo.
Miarahaba antsika rehetra ary misaotra amin'ny bilaogy!
Manampia fifandraisana vaovao amin'ny kaonty Gmail
Ity lalao ity dia teratany ho an'ny torohevitra GNU / Linux +